Haweeney Soomaaliyeed oo Ka Macaashtey Ka Ganacsiga Bas Baaska? – Goobjoog News
in Faallo, Ganacsiga
Si hooyadood u maareyso nolosha carruurtaas, waxey isku dayday iney samayso ganacsi xaafadeed yar. Sacdiya iyo hooyadeed waxey billaabeen iney waddooyinka xaafadaha ku iibiyaan macmacaanka yaryar ee ay dadku xaafadu isticmaalaan sida: “Bataatiga, Bajiyaha, Lawska Nacnacburka, Nacnac lubbaaniga ” iyo qaar kale oo ay sameyntooda iyo iibintoodaba Sacdiyo ka caawin jirtay hooyadeed marka ay ka timaado Iskuulka.
Waxa ku dhalatey fikrad ah iney sameyso bas-baas ka cuntada lagu cuno. Waxey bilowday tijaabada fikradeedi ayadoo soo iibsatay waxyaabihii ay go’aansatey iney ka sameyso bas-baaska sida yaan-yada, basasha, toonta, ban-banooni, bas-baas ka cas, raqeyga iyo cusbada.
Bas-baaska Sacdiyo hadda wuxuu leeyahay 86 goobood oo lagu iibiyo, wuxuu kaloo yaala dukaamada waaweyn iyo Super-marketyada Mareykanka, hantideeduna waxey gaareysa ilaa 10-milyan oo doollar, waxeyna qorsheyneysa dhawaan iney furto warshado soo saara tirada ugu badan ee la suuq geyn karo.